हेयरड्रेसिंग कैंची हेरचाह र मर्मत मार्गनिर्देशन - जापान कैंची
केश कपाल कैंची देखभाल र मर्मत मार्गनिर्देशन
तपाईंको नयाँ जोडी हेयरड्रेसि bar वा नाई कतराहरू किन्नु भएपछि, तपाईंलाई कसरी राख्ने, सन्तुलन, कस कसलाई र आफ्नो कैंचीको देखभाल गर्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ।
Iss चीजहरू तपाईलाई कैंची हेरचाह र रखरखावको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
तपाइँको कपाल र नाई कात्तिको रेखदेख गर्ने र हेरचाह गर्ने जटिलताहरूलाई बुझ्नु समय र अभ्यास लिन्छ।
यहाँ हामीसँग २ मिनेट पढेको छ कैंचीलाई कसरी हेरचाह गर्ने र कसरी राख्ने भनेर पढ्न।
तपाइँको मनपर्ने तनाव समायोजरको प्रयोग गरेर कैंची कडाईलाई कायम राख्नुहोस्। छाडा कैंची काँढाको समयमा कपाल झुम्काउँछ र झुण्ड्याउँछन्। धेरै टाईट भएको कैंचीले ब्लेडलाई चाँडो तल झार्नेछ।
टाढा सुख्खा वातावरणमा तपाइँको कैंची भण्डार गर्नुहोस्। यदि तपाईं समुद्री किनार वा समुद्रको नजिकमा अवस्थित हुनुहुन्छ भने, आफ्नो क्यांचीलाई प्लास्टिकको केसमा बन्द गरेर सुरक्षित गर्नुहोस्।
प्रत्येक कपाल कटाई पछि तपाईं आफ्नो कैंची सफा गर्नुपर्छ। लामो समय अवधिको लागि ब्लेडहरूका बीचमा कपाल, फोहोर वा पानी छाड्नुहोस्।
भेडा छाला वा कपडाको कपडाको साथ आफ्नो कैंची सफा गर्नुहोस्।
तपाईंको जापान Scissor 'तेल कलम को उपयोग को लागी कैंची ब्लेडहरु संग तनाव घर्षण बिना सजिलै काटिरहेका छन् सुनिश्चित गर्न।
सबै भन्दा राम्रो परिणामको लागि, तेल पेन ब्रशको साथ कैंचीमा तेल फैलाउनुहोस्।
जब तपाईं याद गर्नुहुन्छ कि तपाईंको ब्लेड सुस्त वा कुटिल हुन थाल्छ, तपाईंको स्थानीय बिसात तिखाउने पेशेवरलाई हेर्नुहोस् तपाईंको ब्लेडलाई फेरि-तीखा बनाउन।
तपाईंको कैंचीको मर्मतको वरिपरि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न माथिको बुलेट पोइन्टहरूमा जवाफ दिन सकिन्छ।
तपाइँको कैंचीको हेरचाह गर्न, उनीहरूको सफा, सुक्खा र शियर ब्लेडमा तेल लगाइएको छ भनेर सँधै सुनिश्चित गर्नुहोस्।
पातलो कैंची मर्मतका लागि, काटने पछि दाँत माझमा कपाल हटाउनुहोस्। यदि तपाइँ दाँत माझमा फोहोर वा कपाल हटाउन कठिनाई भइरहेको छ भने, तपाईं सफा गर्न दाँत छनौट वा टूथब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि धुनुहोस्, र पुन: तेल।
धातुलाई क्षति र क्षतिबाट जोगिन, यी सुक्खा र मोहर एक सुरक्षा पाउच मा राख्नुहोस्। समुद्र किनारमा हेयरड्रेसिंग र नाई पसलहरू तिनीहरूको क्यान्सरमा क्षति हुने जोखिममा छन्। यिनीहरूबाट जोगिन, सुक्खा कपाललाई प्लास्टिकको थैलीमा, स्यान्डविच वा फ्रीजर झोलामा बन्द गर्नुहोस्।
मलाई कती पटक हेरचाह र मेरो कैंची मर्मत गर्न आवश्यक छ?
चाहे तपाइँ टेन्सन समायोजन गर्दै हुनुहुन्छ, क्यान्सरलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भनेर जान्ने वा ब्लेडमा तेल लगाउने, यसलाई कति पटक आवश्यक हुन्छ भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
यहाँ कति पटक र तपाइँ तपाइँको कैंचीको हेरचाह गर्न आवश्यक छ मा हाम्रो सारांश छ।
कैंची शार्पिंग व्यावसायिक कपाल र कपालका लागि प्रत्येक दुई देखि तीन महिना।
पूर्ण कैंची तेल एक महिना मा एक पटक आफ्नो कतरन तेल। कुनै कपाल वा फोहोर मिसाएर कपालमा तेल लगाउनुहोस्, तपाईं रक्सी सफा गर्ने पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि बिस्तारै ब्लेड र गियर्समा तेल लगाउन।
हल्का कैंची तेल तेल प्रत्येक दुई देखि तीन दिन को पेशेवरहरूको लागि दैनिक काट्ने।
सफा कैंची हप्तामा एक पटक तपाईंको कैंची सफा गर्नुहोस्। ह्यान्डलहरू, ब्लेड, स्क्रू र गियरहरू सफा गर्न कुनै पनि फोहोर, दाग वा कपालबाट छुटकारा पाउन मदिरा वाइप प्रयोग गर्नुहोस्। क्षेत्रमा पुग्न कडा मेहनत गर्न ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्।
तनाव समायोजन एक पटक एक पटक, तपाइँको कैंची स्क्रूमा निर्भर गर्दै। प्रत्येक महिना तनाव समायोजन गरेर दुई ब्लेडहरू कडा भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्।
कसरी सिजर टेन्सन कडा र समायोजित गर्ने
कडा कैंची भएकोले तपाईंको कटौतीलाई कडा राख्छ र तपाईंको ब्लेडलाई बिग्रिनुबाट बचाउँछ।
दुई ब्लेडहरू काट्ने गतिहरूको क्रममा सँगै राखिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न कैंचीसँग स्क्रू र गियरहरू हुन्छन्। उत्तम तनाव बुझ्नु तपाईंलाई प्रभावकारी रूपमा पुन: मिलाउन अनुमति दिन्छ।
केश कपाल मा आफ्नो तनाव समायोजन गर्न, तपाईं यी तीन चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको कैंची बन्द राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई आफ्नो हातमा कसले समात्नुहोस्।
तनाव समायोजक कुञ्जी लिनुहोस्, वा यदि यो एक हस्त-तनाव-समायोजक हो भने, केवल कडा हुनको लागि ढिलो घुमाउनुहोस्।
एकचोटि सन्तुष्ट भएपछि, तपाईं ह्यान्डलमा एक औंला लूप द्वारा कैंची समात्न सक्नुहुन्छ र यदि तिनीहरू बन्द रहन्छन्, तब तिनीहरू तंग ईन्गुह छन्। यदि शियर ब्लेडहरू खोलिए भने, त्यसोभए तपाईंले कसलाई जारी राख्न आवश्यक छ।
शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ सुझावहरू मर्मत सम्भार र क्यान्सरको लागि हेरचाह गर्न
तपाईंको हेयरड्रेसि sc कैंचीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने वा तोड्ने सब भन्दा साधारण तरिका के हो?
एक स्पष्ट, तर भुइँ वा कुनै अन्य हार्ड सतहमा आफ्नो कैंची छोड्ने बेवास्ता। तपाईंको कैंचीलाई तिनीहरूलाई झार्दै क्षति पुर्‍याउनाले ब्लेडहरू अक्सर गलत मिसिएन
कैंची सुख्खा राख्नुहोस्। तपाईं दाग, रस्ट र क्यान्सरलाई सामान्य संक्षारक क्षतिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि तिनीहरूले भिजाइएको छ भने
कैंचीलाई अधिक कस नगर्नुहोस्। ब्लेडहरू तल लगाउन सकिन्छ वा भाँच्न सकिन्छ यदि कैंची धेरै कडा छ भने।
यदि तपाईंले कपाल काटिरहनु भएको बेलामा कपाल मुड्ने वा झुम्काएको देख्नुभयो भने, तनाव समायोजक पनि धेरै ढीला छ। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् किनकि यसले कैंची भित्रका गियरहरू लगाउन सक्छ।
Yoru कैंची तीखो र मर्मत गर्दा प्रशिक्षित पेशेवरहरुलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। अनुभवहीन शार्पनरहरूले प्राय जसो तपाईंको कैंची भाँच्दछ।
यदि तपाईं पर्याप्त विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईं हाम्रो आफ्नै कैंची तिखार्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कैंची तिखार्ने धेरै म्यानुअल तरीकाहरू छन्, जस्तो कि तपाईं चक्कु हुनुहुन्छ। तर सब भन्दा राम्रो परिणाम ग्रिन्ड ब्लेड मेसिनबाट हुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो कैंचीले "क्ल्याकि" "" वा "क्लन्की" आवाज बनाइरहेको सुन्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले ब्लेड र टेंशन समायोजकको प the्क्तिबद्धता जाँच गर्नु पर्छ।
तपाईं सफा सफा चिकना गतिमा कपाल काट्न सक्षम नहुन्जेल क्यान्सरको तनाव समायोजनको साथ प्रयोग गर्नु उत्तम हो। प्रत्येक जोडी र गियर फरक-फरक हुन्छन्, र पनि नयाँ हेयरड्रेसि sc क्यान्जरको जोडी प्राप्त गर्दा, तपाईंले तनाव समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ।
तीखो मेसिनहरूको साथ प्रमाणित र अनुभवी सिचु मर्मतहरू तपाईको उत्तम विकल्प हो। यदि तपाईंसँग हेयरड्रेसरहरूको प्रीमियम जोडी छ, र तपाईं तिनीहरू मध्ये दश वा बीस बर्ष आयु प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए सुनिश्चित गर्नुहोस् एक पेशेवर मर्मत र तीखा सेवा।
खराब र संक्षारक क्षति तपाईं क्यांची बिना तपाईं ध्यान दिए बिना हुन सक्छ! बत्तीको बीचमा प्रत्येक महिना सफा गर्न हल्का ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्। सफाई पछि पूर्ण Scissor को लागी, रक्सी वाइप वा Isopropyl प्रयोग गर्नुहोस्।
फोहोर वा दाग कैंची सफा गर्ने उत्तम तरिका भनेको मदिरामा आधारित सफाई तरल पदार्थ हो। तपाईं विशेष गरी कैंची र छुरीहरू सफा गर्नका लागि प्रयोग गरिएको Isopropyl रक्सी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो मदिरा सफा गर्ने विधिले कुनै पनि फोहोर, कपालको तेल, आदि हटाउँछ।
कति पटक कैंची तिखार्नु पर्छ?
त्यहाँ क्यान्सरको एक स्वयं-तेज जोडी जस्तो केहि चीज छैन, त्यसो भए तपाइँ कति पटक आफ्नो हेयरड्रेसि or वा नाभी कपाल कडा पार्नु पर्छ?
स्थायी क्षतिबाट बच्नको लागि तपाइँको कपाल र नाई कात्ती कम्तिमा वर्षको एक पटक परवाह गर्नु पर्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको कात्तीको साथ दैनिक कपाल काट्नु हुन्छ, तब हामी सिफारिश गर्दछौं एक पेशेवर शार्पनिंग र सेवा वर्षमा एक पटक भन्दा बढी।
दुबै कपाल काट्ने र पातलो पार्ने कैंची उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि पेशेवरहरूले दुई-चार महिनामा तिखो हुनु पर्छ।
स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको सस्तो कैंचीलाई प्राय: तिखार्नु पर्छ।
उच्च गुणस्तरको जापानी कैंचीलाई कम तीखो पार्नु पर्छ यदि तिनीहरू राम्रोसँग सफा र नियमित रूपमा तेल लगाइन्छ भने।
हेयरड्रेसि and र नाई शार्पनिंग सेवाहरूले स्पष्ट रूपमा औंल्याए कि बढी कपाल काट्नुको मतलब कैंची कपाल छिटो हुन्छ, त्यसैले तपाईंले हेर्नु आवश्यक छ जब कैंचीले काट्ने बन्द गर्छ।
यो थाहा पाउन गाह्रो छ कि तपाइँ कती कती तेज गर्नुपर्नेछ, किनकि केवल कपाल वा नाईलाई कहिले थाहा हुन्छ।
जापानी कपाल कैंचीले प्रीमियम कोबाल्ट, 440० सी र VG10 इस्पात प्रयोग गर्दछ जसलाई कम अक्सर तिखार्ने आवश्यकता पर्दछ।
यदि तपाइँ प्राइसलाइन वा केमिस्ट वेयरहाउसबाट सस्तो जोडी खरीद गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ यी एक वा दुई महिना भित्र ब्लन्ट फेला पार्नुहुनेछ।
यी सस्तो कैंचीलाई अधिक धेरै तिखार्ने आवश्यकता पर्दछ र अन्तत: तपाईंलाई जापानी हेयरड्रेसि she कतराहरूको समग्र मूल्य भन्दा बढी लाग्नेछ।
त्यसैले आफैलाई धेरै पटक प्रीमियम शियरको साथ शार्पनिंगको उच्च लागत बचत गर्नुहोस्।
शार्पि sc क्यान्सरको औसत लागत $ $०- $ १०० हो, र आधारभूत इस्पातबाट बनेको कपालको सस्तो made १०० जोडीलाई एक बर्षमा चार देखि छ पटक शार्पन गर्नु पर्छ। न्यूनतम मा, तपाईं अन्ततः जोडी गर्नुहुन्छ $ २००-50०० एक बर्ष तिनीहरूको प्रदर्शन कायम राख्न।
अब एक महँगो जोडी Yasaka कतराहरू $ 400 सम्म लागत, तर यदि तपाईं सफा गर्नुहुन्छ, तेल र यी मुख्य राम्रो, तिनीहरूले मात्र वर्ष मा एक वा दुई पटक तीक्ष्ण आवश्यकता। यसले तपाइँलाई एक बर्ष $ 100-200 बचत गर्दछ। एक जोडीको लागि लगानीको लायक हुन्छ जुन अक्सर तिखार्ने आवश्यकता पर्दैन।
पढ्न: प्रत्येक शहरमा अष्ट्रेलियाको सर्वश्रेष्ठ सिंची शार्पनिंग सेवा
तपाइँ कहिले एक कैंची शार्पनर भ्रमण गर्नुपर्छ?
यहाँ हामी सबै कारकहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भनेर निर्णय गर्नको लागि तपाईले कपालको कती काट्ने आवश्यकता पर्दछ। गुणस्तर, रखरखाव र दैनिक प्रयोगमा निर्भर गर्दै, तपाइँको कैंची तिखार्न सकिन्छ महिनामा एक पटक वा वर्षमा एक पटक!
यसले दाँत तनाव र परिवर्तनको साथसाथ सफाई र तेलइनिंग समावेश गर्दछ। विभिन्न घटकहरू कपालको सतह, सुक्खा र गीला, कटौतीको संख्या र क्यान्सरको प्रकृतिको केही विस्तारमा प्रदर्शन गरिएको हो।
यो सब भन्दा बढि प्रश्नहरू मध्ये एक हो। कुनै पनि दरमा प्रत्येक वर्ष एक पटक एक मर्यादित नियम हो। एक टन मूल रूपमा विचार र रखरखाव मा स्थापित छ। दिनहुँ हेरचाह र देखभाल गर्नुपर्छ।
यसले दाँत तनाव र परिवर्तनको साथसाथ सफाई र तेलइनिंग समावेश गर्दछ। बिभिन्न चलहरू कपालको सतह, सुख्खा र गीला, केही अपरिभाषित समय फ्रेम र क्यांचीको प्रकृति भर प्रदर्शन गरिएको संख्या हुन्।
उत्तम कैंचीलाई अक्सर कम मान दिइन्छ
भरपर्दो तीखोपनका लागि, काटना र खतरनाक कतराहरूको लागि खोजी गर्नुहोस् जुन:
उच्च गुणस्तरको इस्पात किन्नको लागि महँगो छ, तर तिनीहरू लामो समयसम्म तीक्ष्ण किनार समात्दछन्
KMART, TARGET, AMAZON, इत्यादाहरूबाट सस्तो कपालको क्यान्सरहरू कुटिल छिटो हुन्छ र तपाईंको कपाललाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।
जर्मनी वा जापानबाट प्रिमियम सिंची स्टिल हिताची एटीएस 314१10 वा वीजी -१० स्टील हुन्
हात-उत्पादन, हात-हन्डेड, टेम्पर्ड जापानीसँग धनुधार धार छ
इस्पातको कठोरताले Rock Rock HRC कठोरता प्रयोग गर्दछ; जहाँ महँगो इस्पात 52२ HRC वरपर छ र सस्तो स्टील 44 XNUMX HRC वरपर छ।
जापानी 440० सी स्टील (अनुमानित -48 52--10२ HRC) र VG-XNUMX बाट क्यान्सरहरू केहि हुन् यदि पेशेखेलका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय छ।
तपाईं आफ्नो कैंची कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
सबैजनाले कपालको क्यान्सर बिभिन्न किसिमले प्रयोग गर्दछन्, र ती तरिका जुन तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्नको लागि ठूलो कारक हो कि तपाईंले कति पटक आफ्नो क्यान्सर तेज पार्नुहुन्छ।
तपाइँको क्यांची तीखो रहनु पर्छ यदि तपाइँ निम्न अनुसार हुनुहुन्छ:
तपाईं नम र सफा कपाल काटेको छ। राउर ड्राई र फोहोर कपालबाट टाढा रहनुहोस्।
दिनमा १० पटक भन्दा बढि कटौती गर्दै, हप्तामा days दिन, र तपाईंले अक्सर आफ्नो क्यान्सर तिखार्ने आवश्यक पर्दछ!
साथै, कपाल विस्तार, वा उपचार गरिएको कपाल जसमा केमिकल, तरल पदार्थ, कन्डिशनर वा जेलहरू छन् भनेर काट्नु हुँदैन।
तपाईको ख्याल गर्ने कैंची लामो समयसम्म टुing्गिन्छ!
जीवनका प्रायः चीजहरू जस्तै तपाईको क्यान्सरको अधिक हेरचाह र देखभाल गर्नुहोस्, तपाईंलाई प्राय: तीब्र पार्नुपर्नेछ।
तपाईंको कैंची प्राय: शार्पिंगबाट बच्न, निम्नका साथ उनीहरूको हेरचाह गर्न निश्चित गर्नुहोस्:
तिनीहरू राम्रोसँग तेल (सिंची वा चक्कु तेल) नियमित रूपमा र सफा गरिन्छन्।
तपाइँको कैंचीलाई चिसो वा गीला छाड्नुहोस्।
काट्ने सतहहरू कोरिन वा कोरिन हुँदैन। शारीरिक क्षतिबाट जोगिनुहोस्।